Soo dejisan Free Audio Editor 1.1.35.831 – Vessoft
Soo dejisan Free Audio Editor
Free Audio Editor – software ah loogu talagalay in la qaabab file maqal ah oo caan ka shaqeeyaan. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad xaalkaa iyo saaro kuwan raadkaygay audio ka video files. Free Audio Editor awood u si loo muujiyo qaybaha doonayo ee kuwan raadkaygay oo u kala qaybi jajabkii ka lambarro kala duwan. Software ka kooban filter gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad la qabsato mugga file maqal ah soo saarka ah. Free Audio Editor sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku darto iyo edit tags in qayb ka mid ah loo baahan yahay ee faylka.
Taageerada qaabab maqal ah oo caan ah
Awoodda lagu soo saaro kuwan raadkaygay audio ka video files
Habaysaa mugga file-saarka
Add iyo tags xaalkaa
Free Audio Editor Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Video Converter Factory Pro 8.8